नेपाल आज | चढ्नै पर्ने ‘स्विफ्ट’ कार, यस्तो छ यसको विशेषता
व्यापार भिडियो कर्पोरेट ओटोमोबाइल
चढ्नै पर्ने ‘स्विफ्ट’ कार, यस्तो छ यसको विशेषता
मङ्गलबार, २२ साउन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । तपाईं आफ्नो जीवनमा कार चढ्ने रहर पालेर बस्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईंको मनमस्तिष्कमा बजारमा उपलब्ध अनेकन कम्पनीका कारका मोडेलबारे पक्कै पनि सहस्र प्रश्न उब्जिरहेको हुन सक्छ । यो तपाईंको प्रश्नको भुँवरीमा तपाईंलाई सही सूचना र त्यसबारे जानकारीको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
तपाईंले कारका मोडेलका सम्बन्धमा आफ्ना नजिकका मित्र वा नातेदारसँग अवश्य पनि छलफल गर्नुहुन्छ होला । तपाईंका नातेदार वा साथीभाइले तपाईंलाई उनीहरूले हासिल गरेका कारका सम्बन्धमा जानकारी अवगत गराउँछन् । तर तपाईंलाई अझै आफूले किन्न चाहेको कार भरपर्दो र प्राविधिक रूपमा दरिलो होस् भन्ने चाहनु हुन्छ । त्यससन्दर्भमा तपाईं अझै कारका मोडेलका सम्बन्धमा गहिराईमा पुग्न चाहनु हुन्छ होला । तपाईंलाई यतिबेला त्यस्ता जानकारीको आवश्यकता पर्छ ।
जसलाई तपाईंले विश्वास गर्न सकोस् र तपाईंले नजिकको सोरुममा गएर गाडीको विविध पक्षमाथि जानकारी हासिल गर्न सकोस् । यही द्विविधाग्रस्त अवस्थामा तपाईं किँचित पनि नपरुन् र तपाईंको गाडी किन्ने छनोट सही होस् भन्नाका लागि हामी पनि तपाईंको सहयोगी बन्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।
हाम्रो यो प्रयास तपाईंका लागि सार्थक होस् र तपाईंको लगानी सही ठाउँमा परोस् एवं तपाईं स्वयं अथवा तपाईंको परिवारलाई तपाईंले दिन चाहेको सुविधा र खुसीमा हामी पनि साझेदार बन्न चाहेका छौँ । हाम्रो सानो सहयोगको एक कदमले तपाईं र तपाईंको परिवारको खुसीमा अनेकन कदम थप्न पाएमा हामी पनि आफूलाई धन्य ठान्नेछौँ ।
आज हामी बजारमा उपलब्ध अनेकन कम्पनीका कारका मोडेललाई निर्धक्कसँग पन्छाएर एकै मात्रै विश्वासिलो, भरपर्दो र तपाईंको जीवनमा सहजता होस् भन्नाका लागि तपाईंको बजेट सुहाउँदो र सजिलै किन्नका लागि दायाँबायाँ सोच्नै नपर्ने मारुती सुजुकीको स्विफ्ट कारको विविध पक्षमाथि चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । हाम्रो विश्वास छ, यो चर्चाले तपाईंलाई ढुक्कसँग आफ्नो कार चढ्ने इच्छा, आकांक्षामा सघाउ पुग्ने छ ।
हो, तपाईंको जानकारीका लागि हामी यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दै छौँ कि स्विफ्ट कारले भारतमा सन् २००६ र २०१२ मा ‘इन्डियन कार अफ द इअर’ को उपाधि जितेको छ । यो स्विफ्टले थोरै समयमा कमाएको गुणवत्ताको प्रतिफल हो । त्यो पनि तपाईंहरू जस्ता सचेत र जागरुक प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारिक अनुभवको आधारमा स्विफ्ट कारले अन्य उपाधि पनि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ ।
यस्तै सन् २०११ मै बिबिसी टप गिएर म्यागेजिनले स्विफ्ट कारलाई ‘स्मल कार अफ द इअर २०११’ ठहर गरेको हामी थप जानकारी दिन चाहन्छु । त्यति मात्रै होइन ओभरड्राइभले पनि २०११ मा ‘कार अफ द इअर’ ले पुरस्कृत गरेको थियो । स्विफ्ट कारले द अटो अवार्डस् २०११, एनडिटिभी कार अफ द इअर सिएनबि भ्युअर्स च्वाइस कार अफ द इअर २००६ को सम्मान प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
३८४० एमएमको लम्बाई १७३५ एमएम चौडा स्विफ्टको १५३० एमएम उचाइ छ । अर्थात् ठिक्कको उचाइका कारण यो कार अरू भन्दा बढी आरामदायक छ । १६३ एमएमको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भएका कारण स्विफ्ट नेपालका कच्ची सडकदेखि चिल्ला सडकहरूका लागि पनि उपयुक्त छ । १ हजार ३ सय १५ किलोग्राम पूर्ण तौल भएको स्विफ्टको अगाडिको पांग्रामा डिस्क ब्रेक छ भने पछाडि ड्रम ब्रेक छ । इलेक्ट्रिक स्टिरिङ रहेको यो कारको टर्निङ रेडिअस ४.८ (मि.) छ ।
आरामसँग पाँच जनाले यात्रा गर्न मिल्ने यो कार एउटा सानो परिवारका लागि, कार्यालय प्रयोजनका लागि उपयुक्त छ । यस कारमा ३७ लिटर इन्धन अटाउने ट्यांकी छ । चार सिलिन्डरको ११९७ सिसीको इञ्जिन जडित यो कारको अधिकतम शक्ति ६००० आरपिएमको दरमा ६१ किलोवाट छ । कारको सस्पेन्सन अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ राखिएको छ । अगाडिको म्याक फेर्सन स्ट्रट छ भने पछाडि टोर्सन बिम जडान गरिएको छ ।
इन्फोटेन्मेन्ट यो कारमा इन्फोटेन्मेन्ट प्रणाली पनि स्मार्ट नै छ । अटो गिएर सिफ्ट, पुस स्टार्ट–स्टप बटन, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, स्मार्ट कि, स्टिरिङमै अडियो नियन्त्रण गर्न मिल्ने सुविधा आदिले यो करलाई ‘सिम्प्ली द बेस्ट’ बनाएको छ । पेट्रोलबाट चल्ने यो कारले प्रतिलिटर २२ किलोसम्मको माइलेज दिन्छ । अलि हेभी मोटरसाइकलहरूले ३५–४० किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिन्छन् । कार भएर पनि यसले २२ किलोमिटर दिनुलाई मितव्ययी मान्न सकिन्छ । सुरक्षा सुरक्षाको प्रबन्ध पनि राम्रो छ । अगाडि नै दुई वटा एअरब्याग छन् ।
जसले सबैभन्दा बढी जोखिममा हुने दुईको सुरक्षा गर्छ । यो कारमा इबिडीसँगै एबिएस प्रविधि पनि छ । यो भनेको ब्रेकको आधुनिक रूप र सुविधा हो । पार्किङका समयमा कारको पछाडिको भाग चालकलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ । पछाडि कुनै वस्तु ठोक्किने सम्भावना पनि हुन्छ । यो समस्याका लागि कारमा सेन्सर र क्यामेरा जडान गरिएको छ । नेपालका लागि मारुती सुजुकी कम्पनीको स्विफ्टलगायत अन्य गाडीका आधिकारिक बिक्रेता सिजीका अनुसार स्विफ्टलगायत अन्य गाडीहरूको पुनर्बिक्री (रि–सेल भ्यालु) मूल्य सन्तोषजनक छ । माथिका यति धेरै जानकारीपछि तपाईंको कार किन्ने चाहनालाई अवश्य पनि स्विफ्टले पूरा गर्नेछ ।
तपाईं यकिनका साथ कारको छनोट गर्न सक्नु हुन्छ र अनि भन्नुहुन्छ, ‘स्विफ्ट इज माई ओन कार । तिमी छौ त मलाई सजिलो भएको छ ।’ सायद, अब तपाईं तयार हुनुभयो होला आफूले पसिना काढेर कमाएको सम्पत्तिलाई तपाईं र आफ्नो परिवारमा सामेल गर्न दुलही भित्र्याए झैँ भित्र्याउने बेला भएन र ? स्विफ्ट कार ल्याउनुस् नातेदार, इष्टमित्रको बधाईको पात्र बन्नुस् । अब मात्र बाँकी छ, तपाईंको इच्छाशक्ति ।
मारुती सुजुकीका विभिन्न मोडेलका गाडी खरिद गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ वा टेस्टड्राइभ गर्न चाहानुहुन्छ भने ९८१८२९२५४४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । अथवा नजिकको सीजीअटोकमको शोरुममा पुगरे बुकिङ गर्न सक्नुहुने छ ।
maruti suzuki swift 2018 मारुती सुजुकी
हिन्दमाथीको दमन बन्द गर भन्दै नेपालमा इमरान खानको पुत्ला जलाइयो